पूँजीबजारलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाई स्टक डिलरको काम गर्नेछौैं
पूँजी बजारमा स्टक डिलरको रूपमा काम गर्ने योजनामा जुटेको नागरिक लगानी कोषले अनुमति पाउनुअघि नै परीक्षण थालेको छ । कोषले परीक्षण स्वरूप सञ्चालित म्युचुअल फन्डबाट १० करोड पूँजी दोस्रो बजारबाट शेयर खरीदविक्री गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा कोषको पछिल्लो गतिविधि र सामाजिक सुरक्षा कोष आएपछि पर्ने असरबारे कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालसँग आर्थिक अभियानकी ममता थापाले गरेको कुराकानी :
सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष योजनाले सबै कर्मचारीलाई समेटेर सुविधा दिने भएको छ । यसले अब नागरिक लगानी कोषलाई प्रभाव पार्ने भयो । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषले नागरिक लगानी कोषको कार्यक्रमलाई असर गर्छ भन्ने हल्ला मात्र हो । यो विषयमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको छ । यसबारे मानिसलाई अवगत नभएर पनि यो अनुमान गरिएको हुनुपर्छ । नागरिक लगानी कोषका कार्यक्रम ११ ओटा छन् । यी कार्यक्रम पनि अलग अलग प्रकृतिका छन् । अहिलेसम्म नागरिक लगानी कोषले समेटेको कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषले समेट्दैन । अहिले नागरिक लगानी कोषले सबै नागरिकलाई समेट्दै गएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत स्वतन्त्र मजदूर तथा विभिन्न पेशाकर्मीलाई समेटेको छ ।
तर सबैको धारणा सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै कर्मचारीलाई समेटेर सुविधा दिने भन्ने छ नि ?
खासगरी मानिसको मानसिकता नै कर्मचारीतिर मात्र केन्द्रित भएर यो समस्या आएको हो । हामीले कर्मचारी मात्र नभई आम जनमानसलाई पनि सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने बानीको विकास गर्नुपर्‍यो ।
2019-03-18 - 189 view(s) - abhiyan